Ogaden News Agency (ONA) – Maxaan uga soo qaxay dhulkaygii? Maxamad Nuur
Maxaan uga soo qaxay dhulkaygii? Maxamad Nuur
Hal sabab ah ayaa igu xambaartay, inaan ka lugeeyo dhulkii aan ku dhashay, ku barbaaray, hantidu naga taalay. Anigoo u jahaystay dhul iyo dad aanan aqoon ulahayn. Waxaase laga yaabaa, in qaarkeen siiyaan sababa kale. Laga yaabo inaad tidhaado way badan yihiin oo qofba dantii ayuu uga soo qaxay. Qaarbaa geela goraduuf ka laayay, qaarra lo’diibaa ka jabtay, waxaa kale ood maskaxda ku haysaan, Abaar iyo gaajo, Jahli iyo aqoon la’aan iwm. Laakiin marka aad akhrido sheegada, siday ku bilaabatay iyo siday ku dhamaatay ayaad ogaan hooyada dhibabku tay tahay.
Reerkanagu xoolo badan ma lahayn, sidaa darteed, waxaan soo dagnay tuulada Boodhley (ceelka bullaale). Runtii waan fara madhnaa oo xaaska iyo laba caruur oo isku nuuga ayaan watay, laakiin marti galin, iyo guri la iseexsho ninna kamaana sugin oo guud ahaan dadka meesha dagan danleey ayay ahaayeen.
Inta badan dadka tuuladu waa qaxootigii kasoo laabtay Soomaaliya. Dib’udajin iyo gacan qabasho kama aanaan sugin hay’ad iyo dowlad toona.
Dhulku wuu barakaysnaa, nimcada eebe een lasoo koobi karinna way taal-taalay.
Waxaan ka bilaabay dhisidda guri. Qalabka dhismaha ee aadanuhu xilligan adeegsado ma yaallo, laakiin waxaan ku hurinbaa la yeelaa ee waxaan isticmaalay qaab dhismeedka qadiimiga oo reerkii waxaan usameeyay dirgad dhaxan, roob, qaboow iyo qorraxba laga galo.
Waxaan ku xigsiiyay, maqaaxi aan shaaha ku dhalaaliyo, si aan caruurta ugu masruufo. Macaamiishu waxay ubadan yihiin geeljire, lacagna isma yaqaanaan ee caanaha ayunbaan shaah ugu badalaa. Muddo badan ayuu xaalku ahaa caano-shaah malab ku dhuuq.
Dhulka waxaa ka buuxa midhaha qudaarta roob ku baxa ah ee cidna beeran. Dhanka aad u eegtaba hohob iyo ciid guduudan ayaa wadhan. Jinow, xangay, kordhis, uneexo, il-geel, coodan, gob, garas, madheedh, cillah, doonbir iyo likke ayaa dhankaad eegtaba muush ah.
Maadaama oo markan caruurtaydii badatay oo ay sagaal (9) yihiin, waxaa lagama maarmaan noqotay inaan helo qaabkii aan ku kurin lahaa. Midhahan badan ee dhulka ku yaala cunis way leeyihiin laakiin nolal dheer, oo dhar iyo dhuuni kaleba lasiisto male, ma guri kartid oo iib male.
Waxyar oon maqaaxida ka uruuriyay ayaan kusoo gatay generator hal bostan ah. Dhulku wuu balaadhan yahay oo dhankaad doonto ayaad uxuli ee waxaan tagay galaha (qarka) togga Jarar. Waxaana kubeeray, noocyo qudaar ah oo kala duwan, runtii dhulkeenu waa dhul dihin oo beertii yarayd way bulaashay. Dharaartii daayin keenaba qudaarbaan suuqyada Dhagaxbuur iyo Guunagado geeyaa.
Dhanka kale dhibkakama war li’i oo hadh iyo habeen qawdu way bixi, hebaallo waa la gowracay kuwana jeel Ogaden baa la geeyay waa war maalmeedka. Aniguse waxaan lahaa balaayooy, buulbaan kaa galay. Ujeedadu waxay ahayd korinta diigaanyadan isuma qadada ah. Waa sagaal iyo mid uurkunoole ah.
Maalin maalmaha kamida waxaa yimid ciidan atoobiyaan ah, waxay igu eedeeyeen inaan beerta ku taageero ONLF. Hadii aan ka doodi lahaana ma jirin cid gartayda qaadaysa, xor la iima siin inaan xiitaa u hadlo sida xaal ahaa. Waxay igu bilaabeen budh. Budh ayay ila dhaceen, garaacis badan kadibna hal su’aal ayaa lay waydiiyaa oo ONLF saw ma taageertid? Waan ku ognahay. Anigu waxaaban u qaatay ONLFta ay ka hadlayaan inay tahay caruurtayda maadaama aan iyaga uun uxamaalayay. Waxay iisii qaadeen gurigii. Xaaskii markii ay aragtay sida aan udilahay ayay sastay. Dhankooda ayayna usoo oraday iyada oo qaylo iyo oohin isku daraysa.
Atoobiyaanku ma aha niman dub aadane ku yaallo, xabbada ayay ku fureen gabadhii uurka lahayd, kobtii ayay ku nafbaxday. Anigu awood malihi oo waan dilahay, aaskeediina la iima ogalaan, waxaa la igeeyay Dhagaxbuur, oo maalma ka dibna Jigjiga la iisii dhaafiyay.
Ma ogayn goorta la imaxkamadeeyay, laakiin waxaa la iisheegay in laygu xukumay 20 sano oo xadhig ah.
Anigoo xabsi, nolal xumo, jidh-dil iyo handadaad joogta ah kujiro. Anoo la darisa dad maalin walba mayd-sugaayaal ah, anoo arka gaadhiga qashinka ee kolba ruux ladabay lagusii wado- walbahaar iyo walwal ka badan imahayo, caruurtaydii oona war ka hayn meel oy joogaan, waxaa iigu war danbaysay inay la qaxday islaan ayay u ah, oo ay la aaday dhankaas iyo Keenya.
Maalin ayaa la iiyimid oo laygu yidhi waa lagu sii dayn ee waa inaad ciidanka Liyuu police raacdo, waan aqbalay, markii aan dharaaro dhex-joogayna waxaan helay jaanis aan kaga baxsado.
Eega waxaan joogaa xero qaxooti, ee dalkaygii maxaan uga soo qaxay?